TRINITERA: SOMOS FAMILIA
Tafahaona tao Antananarivo ireo Solontena
isam-paritry ny Fianakaviam-be Trinitera teto Madagasikara ny 12-15 aogositra
lasa teo. Fihaonana handalinana manokana ny anjara toeran'ny lahika eo anivon'ny
fiangonana moa no natao tamin'izany. Tsy hoe fihaonana sy fanovozam-pahalalana
ihany anefa fa fanamafisana ihany koa ny maha-Fianakaviana iray : Somos Familia. Fianakaviana hanome Voninahitra ny Trinite Masina sy hitondra fanafahana amin'ireo mila izany, miantomboka amin'ny tena.... maherin'ny 150 no tonga namonjy izay fihaonana izany, izay
natao teny amin-dry Masera Trinitera teny Antohomadinika.
Ho an'ny Frera manokana dia nitohy tany amin'ny lamesa voalohan'i Mompera Bernard tany Anjavidy Amorona (antsiriribe) ny maha-mpirahalahy mianala....